အဆိုပါ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုအခမဲ့နှင့်လျှို့ဝှက်တယ်လီဖုန်းတိုင်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ထောက်ခံမှုလူနာများနှင့်အခြားမည်သူမဆိုကူညီသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးတို့သည် SarcoidosisUK သူနာပြုများအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည် - နှစ်ဦးစလုံး sarcoidosis ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်သူကို NHS သူနာပြုများဖြစ်ကြသည်။
Sarcoidosis လူနာနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုမကြာခဏသူတို့လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ထောက်ခံမှုသူတို့၏မိသားစုဆရာဝန်ကနေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အထူးကုခံယူမရှာပါ။ အဆိုပါ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုအများကြီးအပိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်း sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုပေးတည်ရှိ။
အဆိုပါ SarcoidosisUK သူနာပြုများတဦးနှင့်အတူတစ်ဦးကခေါ်ဆိုခသင်မကြာသေးမီကရောဂါပြီအထူးသဖြင့်လျှင်, အသငျသညျအခြို့သောအာမခံနှင့်မျှော်လင့်ရာ၏ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပေးသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နောက်တစ်နေ့ချိန်းသို့မဟုတ်ဘယ်မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့အကြည့်အရှုသွားမေးရန်ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုအဖြစ်သင့်စောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုအကြံပေးချက်များပေးထားနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်အချိန်စာရင်းစေရန်, အောက်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို sarcoidosis သငျသညျထိခိုက်နေသည်ဘယ်လိုသိကြကုန်အံ့။ ကျနော်တို့4ရက်အတွင်းတစ်ဦးအဆင်ပြေအချိန်တွင်သင်ကပြန်မခေါ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု မှစ. တစ်ခေါ်ရန်အချိန်စာရင်း
ခေါ်ဆို '' Fantastic 'သို့မဟုတ်' 'Pretty ကောင်း' 'အဖြစ်တိုင်ကြားမှုအားအဆင့်သတ်မှတ်ရန်
"ငါသည် SarcoidosisUK တိုင်ကြားမှုနဲ့အကြီးအတှေ့အကွုံမြားခဲ့ရပြီးအများဆုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမအားမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ငါလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ကြောင်းနဲ့တူငါခံစားရတယ်နဲ့ကျွန်မတစ်ယောက်ယောက်ကိုငါ့စကားကိုနားထောငျခဲ့ကွောငျး2နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အခံစားရတယ်။ ဒီတော့အထောကျအကူမြားနှငျ့ဂရုစိုက်။ "
ငါ sarcoidosis နှင့်အတူခံစားနေရပြီးသူတို့အဘို့အနည်းငယ်သာအသိအမြင်နှင့်ထောက်ခံမှုမရှိသောကြောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်နေရာမှာရှိခဲ့သော်လည်းအဖြစ် "ကျွန်မခံစားခဲ့ရ - ကအခြေအနေကိုနှင့်အတူဘဝကိုနားလည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
"ဒီတိုင်ကြားမှုကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအင်တာနက် မှလွဲ. အများကြီးအကူအညီသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်နားလည်နှင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုငျသညျ, ကျေးဇူးတင်စကားတောက်ပခဲ့သူတစ်ဦးမှစကားပြော။ "
"ဒီအခွအေနေအတူသငျသညျက၎င်း၏ထိုကဲ့သို့သောရှားပါးခွအေနအေအဖြစ်တစ်ဦးတည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အခွအေနေကြုံတွေ့နှင့်အပြည့်အဝငျသညျခံစားခဲ့ရပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သူတချို့တဦးတည်းစကားပြောနိုင်အောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့အလိုရှိသမျှမေးခွန်းများကိုဖြေကြား! တစ်ဦးကကြီးမားသောကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! "
"ဒီသူနာပြုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်သူမကငြိမ်ဝပ်ကြှနျုပျကိုသှငျးထားရုံငါ့အလိုရှိသမျှစိုးရိမ်နားထောင်ပြီးပြန်ပြော၏။ ကျနော်တို့ငါပြန်နှင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်, တစ်ဦးအနေဖြင့်များအတွက်ခေါ်ဆိုခအပေါ်ခဲ့ကြသည်, သူပဲငါ့ကိုပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ကိုယ့်အဘယ်အရာကိုကိုယ်လိုအပ် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "!